China RFID RD-100C warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Tbit
RD-100C waa qalab casri ah oo loo isticmaalo in la wadaago e-baaskiiladaha la dhigo dhinacyada baarkinka go'an. Qalabku wuxuu qaadanayaa tignoolajiyada RFID, taas oo xaqiijin karta shaqada ku saabsan baarkinka saxda ah.
Saxnaanta baarkinku waxay gaadhay heerka sentimitirka, waxay si wax ku ool ah u xallisaa dhibcaha xanuunka ee baarkinka random iyo maamulka dawlada. Sida qalab ka mid ah IOT smart, qalabku wuxuu u baahan yahay in lala isticmaalo IOT smart si loo xaqiijiyo noocyada kala duwan ee hawlaha wadaagga e-mootada.
Alaabtu waa mid deggan oo la isku halleyn karo, ku habboon dhismaha iyo maareynta iibka kadib. Fogaansha aqoonsiga waxa loo hagaajin karaa dabacsanaan si loo daboolo baahiyaha xaaladaha kala duwan ee codsiga.
-- Saxnaanta baarkinka sentimitirka
-- Kordhinta OTA
Akhristaha RFID Cabirka Dhererka, ballaca iyo dhererka: 140mm × 100mm × 16mm
Kala duwanaanshaha korantada galitaanka Taageerada galitaanka danab ballaaran: 4.5V-100V
Habka Isgaarsiinta Interface 485 Isgaarsiinta
Pdayn la'aan Shaqada caadiga ah: <5mA@48V
Heerka ku saabsan waterproof iyo boodhka u adkaysta IP67
Shell maaddos ABS+ PC, V0 heerka dab-demiska
Waxqabadka inta jeer ee raadiyaha RFID
Fogaanta aqoonsiga 0-27cm
Rheerka jawaab celinta ms darajada
Saxnaanta sintimitirka Fogaanta aqoonsiga RFID waxaa la dejin karaa inta u dhaxaysa 0 iyo 1 mitir, masaafada aqoonsiga waxaa lagu dejin karaa iyadoo loo eegayo akhristaha RFID ee lagu rakibay meelo kala duwan ee baaskiilka elektaroonigga ah si loo buuxiyo shuruudaha baarkinka saxda ah.
Kordhinta OTA Qalabka waa la cusboonaysiin karaa meel fog.
Tilmaamaha rakibaadda ee ku saabsan akhristaha RFID:
Akhristaha RFID wuxuu u baahan yahay in lagu rakibo baaskiilka elektaroonigga ah. Baaskiil kasta oo elektiroonig ah wuxuu u baahan yahay in lagu qalabeeyo akhristaha RFID. Akhristaha RFID waxa uu ku xidhan yahay aaladda smart IOT. Meesha lagu rakibo guud ahaan waxay ku hoos jirtaa baadadka elektaroonigga ah. Anteenadu waxay u baahan tahay in ay dhulka u jeeddo, waana in aanay jirin wax bir ah oo ilaalinaya si toos ah hoosteeda.
2. Tilmaamaha rakibidda ee ku saabsan summada RFID:
Calaamadaha RFID waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo tirada elektaroonigga ah ee la dhigan karo goobta baarkinka, iyo meel kasta oo baaskiilka elektaroonigga ah wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu ku rakibo calaamad RFID oo ku taal dhulka si toos ah uga hooseeya baaskiilka elektaroonigga ah.
Hore: Jidka Bluetooth BT-102B
Xiga: Wadaagista ebike IOT WD-215